Microsof Office 2010 + Activator ( Update Link ) ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Office and Document Tools » Microsof Office 2010 + Activator ( Update Link )
Microsof Office 2010 + Activator ( Update Link )
By နေမင်းမောင်10:17 PM20 comments
ကျွန်တော် Microsof Office 2010 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။Activator လေးပါ၇ှာပြီးတင်ပေးထားပါတယ်..။
ကျွန်တော်ဒေါင်းလော့ချ၇တာအဆင်ပြေအောင် 100 MB စီနဲ့ 13 ပိုင်းခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ်..။လိုအပ်တဲ့
သူများအမြန်ဒေါင်းလော့ချထားစေချင်ပါတယ်..။အခုကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ 13 ပိုင်းလုံးကိုဒေါင်းလော့ချပြီး
အပိုင်း 1 ကနေစပြီးဖြေလိုက်ပါ.။ဒါဆို၇င်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်..။ဒီကောင်လေးအတွက် Activator လေး
For 32 Bits User
PART 1: http://www.mediafire.com/?l0sqoov1v2oohs5
PART 2: http://www.mediafire.com/?vvym5d7cvd6hc8m
PART 3: http://www.mediafire.com/?2gt9r3x3tut2etr
PART 4: http://www.mediafire.com/?e3nfwivpdhksfbf
PART 5: http://www.mediafire.com/?pt8cttf3ovtj5cu
PART 6: http://www.mediafire.com/?dv6zcdt0lc00bab
PART 7: http://www.mediafire.com/?j7sjj152jkjuxkg
PART 8: http://www.mediafire.com/?uo6m30p9774t8v2
PART 9: http://www.mediafire.com/?54dvevx9o9yix5j
PART 10: http://www.mediafire.com/?0kx0ca3gb486z96
PART 11: http://www.mediafire.com/?i3ko04wwqlnbygg
PART 12: http://www.mediafire.com/?piiqmtppcjdmt5y
PART 13: http://www.mediafire.com/?2olsnk9ved2aroa
For 64 Bits User
ချမ်းမိစု June 17, 2011 at 9:05 PM
i cant download and i think, link was expired, can u please upload again. i am in other country and i cant buy it. thanks for ur time and afford, Be succeed in ur life.
နေမင်းမောင် October 4, 2011 at 3:17 AM
ဟုတ်ကဲ့အကို .. ကျွန်တော် Mediafire ကနေပြန်တင်ပေးထားပါတယ်အကို....အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ..
Anonymous October 4, 2011 at 7:38 AM
bro , i cant start setup and showed like this....
Microsoft office 2010 does not support upgrading fromaprerelease version of Microsoft office 2010. You must first uninstall any prerelease version of Microsoft office 2010products and associated technologies. correct the above issue and rerun the setup.
Bro , i dont know what it is and i dont install any microsoft 2010.
my computer ....window 7,64 bit,microsoft office 2007 installed ,
can u please give any suggestion ?
နေမင်းမောင် October 4, 2011 at 1:16 PM
ဟုတ်အကို ... ကျွန်တော် 64Bits အတွက်ပါတင်ပေးပြီးသွားပါပြီအကို .. အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ..
Anonymous December 7, 2011 at 7:33 PM
အကို mediafire က file removed for violation ပြနေတယ်..ဒေါင်းမရဘူး ..လုပ်ပေးပါအုန်း
အောင်သူရိန်။ ။ January 22, 2012 at 1:16 PM
အကို ကျနော် Microsoft Office ကို install လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်
Error 1401.Setup cannot create the registry key\_.xlk\_Excel.
Backup\_ShellNew.Verify that you have sufficient permissions
to access the registry or contact Microsoft Product Support
Service (PSS)for assistance.For information about how to
Setup00002a4c\_PSS10R.CHM ဒီလို error တစ်ခုတက်လာတယ်အကို
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိဘူး ကူညီပေးပါဦးအကို
64 bit can't download already.
please advise where can download these.
Thiri March 19, 2012 at 6:07 PM
အစ်ကိုရေ ဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့မရတော့ဘူး လင့် တွေပြန်စစ်ပေးပါအုံးနော်....
အကိုေ၇ FILE removed လို့ပြနေတယ်ဗျ ကူညီပါဦး
hi bro nay,,,,,,,,, i can't dl the activator .... i think there is no more files or somethings wrong... what i should to do?
Microsoft Office 2010 + Activator လေးပြန်တင်ပေးပါလား၊
aung June 8, 2012 at 8:12 PM
အစ်ကိုရေ ဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့မရတော့ဘူး လင့်သေပါပြီ
hi, i am someone who very often go to visit your blog and learn that i want to, i have one request, the MS office 2010+activator program in the link is said removed, i would like to request you for new upload if possible,cauz, it is crucially needed for me and students. Thanksalot.
Migrant teacher, in Mae Sot
kooo August 26, 2012 at 10:17 PM
Microsoft office 2010+Activato ကိုဒေါင်းရန်ပို့ပေးလိုက်တဲ့ကိုနေမင်းမောင်ကိုအထူးဘဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ ဒါနဲ့တလက်စတည်းအကူညီတောင်းပါရစေ Eng-Myanmar Ddistionary ရုပ်၊အသံ ၊အဓိပ္ပယ်ပါဖော်ပြနိုင်တဲ့ဆော့ဝဲလေးရှိရင်ပို့ပေးပါခင်ဗျာ စောင့်မျော်နေပါ့မယ်
i cant download and i think, link was expired, can u please upload again.
ipman August 27, 2012 at 7:51 PM
the link, file are removed from violation so, there is no more software to download. please, help me Ko Nay Min Maung and upload new link for 32-bit.and thank you so much! Long live Ko Nay Min Maung. God bless
သိန်ဖေမြင့် September 20, 2012 at 8:46 PM
အစ်ကို ညီးတော့လားတာအနောက်ကျသွားပြီးထင်းတယ် ဒေါင်းမရဘူးအစ်ကိုနေမင်းမောင်း ညီး Notbook က acer -Aspire 4741z ညီးလက်ရှိ Microsof Office 2007 ညီးပစ်လိုက်တယ် အစ်ကိုဆီက Microsof Office 2010 ကိုယ်လိုချင်းလိုဒေါင်းမရတော့ဘူးအစ်ကို ညီးကိုယ် ကူးညီပါအုန် အဟောင်းလဲး ပစ်လိုက်ပြီး အသစ်လဲးထည့်မရတော့ဘူး ကူးညီးပါအုန်ညီးမျော်နေလျှက်ပါအစ်ကို ညီအီးမေလ်က de1915@hotmail.com
ပါ အစ်ကို ကျေဇူးတင်ပါတယ် ထားဝစဉ်းလေစားလျှက်ပါ ။ ညီး မောင်းသိန်ဖေမြင့်